Raha Te-hanana Fitomboana Ara-toekarena i Karaiba, Mila “Mandray Ny Fomba Fijerin’ny Vehivavy” · Global Voices teny Malagasy
Raha Te-hanana Fitomboana Ara-toekarena i Karaiba, Mila “Mandray Ny Fomba Fijerin'ny Vehivavy”
Mpanoratra Emma Lewis Nandika (es) i Noemi Pérez Rubio, Christel Pistre, Candy
Voadika ny 15 Mey 2017 7:06 GMT
Cecile Watson, mpanorina ny Pitch and Choose (Maka sy Misafidy), iray amin'ireo sehatra nataony hanohanana ireo vehivavy mpandraharaha ao amin'ny faritra. Sary natolotr'i Watson, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra dia mitondra mankany aminà lahatsoratra amin'ny teny anglisy avokoa.
Vehivavy Karaibiana mpandraharaha i Cecile Watson izay manana hevitra hafa mihitsy. Teraka tao Barbade, monina any Jamaika ary manana traikefa 30 taona amin'ny sehatry ny banky sy fandraharahana ara-bola. Tamin'ny 2014, natsangany ny tranonkala mpisava làlana amin'ny famatsiambola ifanotronana pitchandchoose.com, miaraka amin'ny tanjona “hanapariahana ny toekarena” ao amin'ny faritra.
Naoriny ihany koa ny Gr8Way Consulting izay manome fitaovana ho an'ireo vahivavy mpitarika sy mpandraharaha mba hanangana orinasa mendrika sy hiantohana ny fiainany ara-bola, miaraka amin'ny tanjona iray hoe hisy fiantraikany miabo. Niarahany tamin'i Valrie Grant, ilay nahazo ny lokan'ny Commonwealth fanome ny vehivavy mpandraharahan'ny taona, natsangany ny tetikasa FundRiseHer (fandraisana andraikitra ho famatsiambola ifanotronana ao anatin'ny Commonwealth – vondron'ireo tany miteny Anglisy). Ao anatin'ny firoboroboana tanteraka izy io izao, ary manamafy tsy mitsahatra ny fahafahan'ireo vehivavy mpandraharaha hahazo famatsiambola. Nifarana tamin'ny 31 Desambra ny fanentanana voalohany ho fangatahana famatsiambola : valo amby efapolo ireo vehivavy nangataka fanampiana tamin'ilay fandaharanasa.
Endrika iray hafa amin'ny FundRiseHer ny “The Potent Pitch” [ilay Mpandresy Lahatra Matanjaka], bilaogy iray ary andianà tafa mivantana ifanaovana amin'ireo manmpahaizana manokana mifandray amin'ireo mpampiasa vola sy ireo vehivavy efa mpandraharaha nahazo famatsiana. Tamin'ny Aprily no nisy fampianarana tety anaty aterineto momba ireo teknikan'ny famatsiambola ifandrimbonana. Amin'ny May, ny teknikan'ny tambajotra sosialy no ho ampiasaina mba hanehoana amin'ireo vehivavy mpandraharaha ny fomba hakàna tombony avy amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo. Ireo rehetra ireo dia atao miaraka amin'ny fiarahana miasa amin'ireo manampahaizana toa an'i Telojo Valerie Onu, Sandra Glasgow, Ingrid Riley, Marcia Brandon ary Christopher Chaplin. Manantena koa i Watson fa hitondra fanampim-bola ho famatsiana ny tetikasany ireo orinasa mpiahy, ho azo raisina rehefa hatomboka ny fanentanana ho amin'ny famatsiambola ifandrimbonana amin'io lohataona ho avy io. Na mipitrapitra aza ny masony, ny vinany momba ny fahefan'ireo vehivavy karaibianina kosa, tena faran'izay matotra.
Global Voices (GV) : Manana traikefa matanjaka be amin'ny tontolon'ny fitantanana ara-bola ianao. Inona no nanova ny zotra narahanao? Tena fiovàna ve izany?
Cecile Watson (CW) : Io traikefa io no nanangana ny fototr'izay ataoko ankehitriny – ireny asa fandalinana rehetra ireny. Ankehitriny, afaka araraotitko izany mba hanatratrarana tanjona hafa, izay mavitrika kokoa ary tsy misy idiran'izay maha-mpitahiry mihitsy – satria resaka fanaovana izay hisian'ny fiantraikany amin'ny fiainan'ny hafa. Ankehitriny aho tena anaty fahavitantena tanteraka.
GV : Resaho kely aminay ny momba ny Pitch and Choose. Ahoana no fandehan'io tetikasa io?
CW : Tany ampiandohany, somary nihisatra kely, fa efa niomana tamin'izany aho ary efa tsikaritro nialoha. Nitondra lasitra vaovao iray eo amin'ny tsena aho ho famenony. Fotokevitra iray tsy mbola fantatry ny vahoaka karaibianina hatreto ny resaka famatsiambola ifandrimbonana. Izaho no voalohany nanao azy taty amin'ny faritra. Resaka fanapariahana ny toekarena ilay izy. Kanefa, nitombo be ny lazan'ny famatsiambola ifandrimbonana. Tato anatin'ny roa na telo taona farany, azoko ambara fa enina amin'ny olona folo eto Karaiba no mahafantatra ny dikany. Fony aho nanomboka azy, angamba mbola ny iray ampahafolo. Tena betsaka ny otrikarena misy. Ohatra tamin'ny 2011, ny mponina ao Rotterdam dia nanao fanentanana iray hanaovana famatsiamboka ifandrimbonana mba hanaovana tetezana iray ho an'ny mpandeha an-tongotra, izay nananganana habaka iray misokatra, izay tsy ho tanteraka mihitsy raha tsy teo ireo olompirenena nanaiky ny hiditra handray anjara tanteraka tamin'ilay vahaolana. Ny nofinofiko dia ny hahafahana mampiasa azy io hiatrehana ny filàntsika fotodrafitrasa. Saingy ny erikerika maha-tondraka ny renirano, hoy ny fomba fiteny. Ny tanjona dia ny hanome ny angovo sy taridàlana tsy maintsy ilaina ho an'ny famatsiambola ifandrimbonana mba hametrahana fahatongavantsaina sy hisarihana ireo mpankasitraka.
GV : Momba ny fiofanana, inona no fahaizana mety tena ilaina ho ananan'ireo vehivavy ao anatin'ny tontolo ankehitriny?
CW : Ramatoa Kenia Mattis, mpandraharaha mpiara-manorina ny ListenMi Caribeean, dia handray anjara amin'ny fampiofanana ireo misitraka ny FundRiseHer. Manana fahaizamamorona io. Izaho koa, manana maripahaizana injeniera, ary mino aho fa afaka mivoatra ireo vehivavy ao anatin'ny tontolon'ny siansa sy ny teknika, nefa mino aho fa ilaintsika ny fisian'ny tsipi-panohizana avy amin'ny siasan maha-olona. Ilain'izao tontolo izao ny mihetsika mba hanekena ny olona araka izay maha-izy azy, samy manana ny fomba fijeriny manokana rahateo, ary tsy miankina amin'izay fiaviany na ny fanabeazana azony. Miaina anaty tontolon'ny fanapariahana isika izao. Mila miaiky ny fahasamihafantsika isika – Ny olona mety manana “vatsy” saingy aoka tsy hotsaraintsika izy ireny. Samy manana zavatra azo atolotra isika rehetra. Ireny hevitra ireny no manetsika sy mahaliana ahy!
GV : Mifantoka amin'ny fahavitantena ara-toekarena ho an'ny vehivavy ianareo. Nandritra ireo andianà atrikasa natao tamin'ny taona lasa tany amin'ny faritra ambanivohitra tao Jamaika, hitan'ny fikambanana 51% Coalition fa ny fahaleovantena ara-toekarena dia laharampahamehana iray ho an'ny vehivavy. Mino ve ianareo fa io no mitranga aty Karaiba amin'izao fotoana izao ?
CW : Raha te-hametraka marina “tetiandrom-pitomboana” isika, mila mandray ny fomba fijerin'ny vehivavy. Tsy maintsy manana izay finiavana izay isika. Betsaka ny kabary misy, saingy ho ahy, tsy mbola tontosa araka ny tokony ho izy ny fahavitantena ara-toekaren'ny vehivavy. Tsy maintsy miditra ao anatin'io ny fiahiana sy ny tohana ifanaovan'ny samy vehivavy. Kanefa, fantatro fa mila fotoana izany, ary andramako ny tsy ho ketraka noho izay rehetra tsy dia mandeha haingana loatra. Fa mipetraka misaintsaina momba izay azoko atao aho mba hitànako ny anjarako, amin'ny fombako, mifototra aminìireo hevitro sy ny fomba fijeriko manokana.
GV : Tao anaty lahatsoratra iray nosoratanao talohan'ny fifidianana 2016 nataon-dry zareo Amerikàna, niresaka “fanovàna fitsipika” ianao. Inona no tianao hambara amin'izany?
CW : Miverina any amin'ilay hevitra hoe ao anaty vanimpotoan'ny fanapariahana isika izao. Niova ny hafainganam-piova fahiny nananan'ireo toerana fiasàna. Saingy mbola mitàna ny anti-panahy. Toy ny any an-toerana hafa ihany, ny fahaizana mitarika sy ny zo hitàna toerana ary hohenoina eto Karaiba dia miankina amin'ny fahelàna, ny saranga sosialy, ny fanabeazana, ny taona ary ny maha-lahy na vavy anao. Kanefa, tsy zakan'ny andian-taranaka Y izany. Ary izaho, heveriko fa zavatra iray tsara izany. Tsy misy zavatra tsara afaka hivoaka raha ahilika ny antsasaky ny vahoakantsika tsy ho afaka hanana fahafahana hitondra sy handray anjara amin'izay fomba tena mety amin'izy ireo. Tsy azontsika atao intsony ny hanamora ireo ohatra tranainy manosika mankany amin'ny tsy fanomezana zo ny vehivavy (sy ireo vondrona hafa voahilika anjorom-bala hatry ny fahagola) satria ny toekarentsika, ny fianakaviantsika ary ny toedraharaha misy ny fiahiana ara-tsosialy antsika, dia efa mitaky ny fametrahantsika rehefa zavatra avy amintsika. Sady koa, ho ahy, ilaintsika fotsiny ny manohy ny asa fanekena ny vehivavy sy fanaovana izay hananan-dry zareo fahavintantena. Raharaha tsara ny fanaovana izany.
GV : Inona no torohevitra mety hataonao ho an'ireo Karaibiana manam-pikasàna amin'izao fotoana izao ?
it will also get you to a place where you can willfully embrace your vulnerability, and let it transport you from a state of merely existing and searching to a state of passionate living. You see, the world needs our authenticity and our genius. We were fearlessly and wonderfully made and each day we get the opportunity to walk closer towards what we are purposed for. It is left for us to take it. And living from a place grounded in purpose can be joyful. And it can be mind blowingly awesome too, as we not only become empowered, but also make the time to empower others similarly.
CW : Te-hilaza amin'izy ireo aho hoe mahaiza maka tombony amin'ny maha-ianao anao. Satria ny fahavitantenan'izy ireo dia hipoitra avy amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina iray sy fifampiofanana eo amin'izy samy izy. Midika izany fa ilainao ny maniry hanorina zavatra izay mendrika sy afaka hahazoana tombony. Azo fintinina amina teboka enina izany, izay tiako hanentanana azy ireo ny famelabelarana azy : ny asa, ny fananany hery mitarika, ny fikarakaràna ny tenany manokana, ny fandraisana fanapahankevitra, ny filaminana sy ny vola. Wealthy Woman Currencies™ (volan'ny vehivavy manankarena) no iantsoako azy ireny. Ireny singa ireny, tany anatin'izay dingana nodiaviko no nanatsoahako azy ary avy amin'ny fandinihako ny an'ny hafa. Tena inoako tanteraka fa ny fahafehezana ireo “vola” enina ireo dia hanova anao, tsy hoe fotsiny ho lasa olona iray feno sy tanteraka, fa koa hitondra anao ho amin'ny zana-tohatra iray hanekenao ny maha-marefo anao, ary hamindra anao hiala amin'ny fiainan'ny zara fa mivelona ho amin'ny fiainana iray ankafizina. Hitanao, ilain'izao tontolo izao ny maha-tokana antsika sy ny fahaizana mahatalanjona ananantsika. Noforonina isika tao anatin'ny fahasahiana sy tamin'ny fomba mahafinaritra be, ary isanandro dia manana vintana ny handroso kokoa hatrany ho any amin'ny hoavy. Miankina amintsika ny hanatratrarana azy. Ary mety hahafinaritra ny miaina manana tanjona. Mety tena hahazendana amin'ny fomba tsy mampino ihany koa, satria tsy hoe fotsiny mandray fahefana isika, fa manolotra fotoana mba hahafahan'ny hafa mahazo hery mitovy amin'izay.
GV : Iza no nitondra aingam-panahy ho anao? Iza no lasitra narahanao ?
CW : i Leotta Quintyne (renibeko) no nakàko ny aingampanahiko, dia i Sheila Whittaker (reniko) ary i Courtnie Watson (zanako vavy). Tsy mba nahita izay sombiny azoko ny renibeko, tena zara raha nanan-koraisina izy. Namatratra entana ambony talantàlana sy niloloha izany nandritry ny kilaometatra maro izy mba hivarotra zavatra kely asan'ny tànany, toy ny kilaoty kely na hetra fampiasan'ireo mpiasa eny an-tanimboly fambolena fary. Nanam-pahasahiana izy ary nividy toerampivarotana teny amin'ny fanaovana lavanty nefa tsy nanana vola akory, ary avy eo nandeha tany amin'ny toerampiasàn'ny raibeko nangataka vola tamin'ny lehibeny. Vehivavy tia mandray an-tànana izy ary ireo fahatsiarovana ananako momba ireo fahasahiranany no mampahatsiahy ahy fa tsy tokony ho be taraina aho. Ny reniko no teny famaritana ny atao hoe “halemempanahy”. Tsy taitra, tsy voahozongozona. Misy hery ao anatin'ny fitoniana, toerana iray matanjaka io. Ny reniko no ahafahako mahatsiahy fa tsy tokony hanome toerana ny fitsaratsaràna na ny lonilony aho, fa miaina fotsiny dia ampy. Ny zanako vavy ( 27 taona) no nampianatra ahy ireo teny toy ny hoe “misogynie – halozàna sy fanaovna tsinontsinona ny vehivavy” ary nanosika ahy hiaro ireo hevitra mivoy fitoviana. Izy no nahatonga ahy hisaintsaina ny dikan'ny teny hoe “feminista – mpiaro ny vehivavy” sy ny maha-zavadehibe ho ahy ny fiarovana ny fiovàna miainga avy amin'ny fomba fijeriko manokana amin'ny maha-olona sy ilay izaho lasa mpitantana ambony. Ho ahy ny fiarovana ny vehivavy, raha ny marina, dia ny fitoviana. Kianja iray voaravona. Izay koa no fahitàn'i Courtnie azy.
GV : Farany, inona no filozofia mitondra ny fiainanao?
CW : Izaho no tahaka izao dia satria tao ny finoako an'Andriamanitra. Izay no fototra iaingàko. Mety ho azoko fehezina toy izao ny filozofiako: fiarovana ny foko satria ao no loharanon'ny maha-izaho ahy, nefa koa toerana iray amelako ny tsirairay haneho ny maha-izy azy avy, na aiza na aiza misy azy ireo eo amin'ny zotram-piainany. Ary raha asaina ho ao aho, ny ho vonona foana hanolotra am-pitiavana ny kely avy amiko, amin'izay fomba mety mba hampitombo hery azy ireo, hiroborobo kokoa eo amin'ny fiainany ary tsy asiana fitsaratsaràna hoe iza izy na avy aiza ry zareo.
Eo anoloantsika ny fanantenana.
Nandika (es) i Noemi Pérez Rubio
Nandika (fr) i Christel Pistre